दोहोरो दमनमा मधेसी दलित | Madhesi - United We Stand
दोहोरो दमनमा मधेसी दलित
December 4, 2008 at 3:22 am Leaveacomment
मधेसी दलित एकातर्फ दलितको पनि दलित छन् भने अर्कोतर्फ मधेसीका रूपमा । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार दलितको जनसङ्ख्या मुलुकको १३ दशमलव ०१ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख ४६ हजार ६५२ रहेकोमा गणनामा उल्लेख भएका बीस जातिमध्ये १३ मधेसी दलित जातिको जनसङ्ख्या १० लाख १ हजार ६२४ छ । सरकारी तथ्यांकमा धेरै मधेसीको गणना हुनसकेको छैन । कतिपय त्यस्ता जातिको पहिचानसम्म हुन नसकेकोले मधेसी दलितको जनसङ्ख्या कम देखिएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ०५४ चत्र १८ गतेको निर्णयले २३ जातिलाई दलित समुदायमा सूचीकृत गरे पनि उक्त सूचिकरण वैज्ञानिक छैन । किनकि मधेस क्षेत्रमा बस्ने कलर, ककैलिया, कोरी, खटिक, पासी, सरभंगजस्ता दलितलाई दलित समुदायमा सूचीकृत गरिएको पाइन्न । सोही कारण उनीहरू राज्यद्वारा दलित समुृदायलाई उपलब्ध गराइने सुविधाबाट वञ्चित छन् । यही स्थिति रहिरहने हो भने नयाँ संविधानले सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक जातिलाई तय गर्ने सुविधाबाट पनि ती पछि पर्ने देखिन्छ ।
पहाड र मधेसका दलितबीच तुलना गर्ने हो भने पनि अन्तरमा ठूलो खाडल देखापर्दछ । डिएफ आइडि र विश्वबैंक २००६ को प्रतिवेदन अनुसार १५ दशमलब ५ प्रतिशत पहाडि दलित भूमिहीन भएकामा मधेस दलितको भूमिहीनता ४४ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । ७ दशमलब ७ प्रतिशत मधेसी बालबालिका १० वर्ष नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् । त्यस्तै गरिबीका कारण बीचमै पढाइ छाड्नेमा पनि मधेसमा नै सर्वाधिक ४६ प्रतिशत छ । यस अर्थमा मधेसी दलितका पनि दलित छन् । समग्र तराईको ३३ प्रतिशत जनसङ्ख्या भूमिहीन रहेकामा त्यसको अधिकांश दलित नै छन् । दलितसँग भएको जमिन पनि कम उब्जाउ, सिंचाइ सुविधा नभएको र असुरक्षित प्रकृतिका छन् । सडक छेउ ऐलानी पर्ती जग्गामा फुसको छाप्रो तराई दिलतको नियति हो । आँधी र आगलागीले पनि तिनै छाप्रालाई पिरोल्ने हुँदा स्थिति वास्तवमै विकराल छ ।
वि.सं. ०२१ सालको भूमि ऐनले तोकेको जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढीजग्गा भूमिहीनलाई वितरण गर्ने नीति आएपछि देखिएको जग्गा लुकाउने समस्या समाधान गर्दै जानुपर्नेमा राज्य मधेसी भूमिहीनलाई नागरिकताविहीन बनाउनतर्फ लाग्यो । लामो समयदेखि मधेसी कमैयालाई सुकुम्बासीको दर्जासम्म दिइएन । जसबाट विस्थापितको पहिलो कित्तामा मधेसी दलित परे । तीन दशकअघि तराईमा खटेको नागरिकता टोलीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया त अपनायो तर कमैया दलितसँग टेक्ने जमिनसम्म थिएन । अहिले पनि नागरिकता लिन जग्गाधनी पुर्जा चाहिने र उक्त पुर्जा लिन नागरिकता चाहिने अव्यावहारिक नियम लागू भइरहँदा मुसहर, चमार, डोमलगायतका दलितसँग कुनै पनि कागजी प्रमाणपत्र छैन । त्यसैले रोजगारी लगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत अप्ठ्यारो पर्दै आएका छन् । भूमिहीन समस्या समाधान गर्न गठन गरिएको विगतको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, पुनर्वास आयोग आदिबाट पनि भूमिहीनको उचित परिभाषा र तथ्यांक बाहिर आएन । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन बजेटमा समेत डेढ महिना पुरानो भइसकेको छ । यी दुवैमा भूमिहीन बारे कुनै ठोस कदम चालिएका छैनन् । थामथुम पार्ने नियतले आएका आश्वासन त कति खाए खाए । तर त्यसले भूमिहीनहरूको भोक टारेन, टर्दैन । कागजी आलुले तरकारीको तृष्णा मेट्दैनथ्यो, मेटेन ।
भ्ूामिहीन मधेसी दलितमाथि राज्यको रवैया यस्तो छ । त्यहाँका जमिनदारले दलितमाथि गर्ने दमन त छँदैछ । जिम्मेवार दलका नेताहरूद्वारा नै औपचारिक रूपमै दलितविरुद्ध अभियानका आˆनै कथा व्यथा छन् । सप्तरीको हरिहरपुरका चमारहरूले सिनु फाल्न इन्कार गर्दा खेप्नुपरेको यातनाले आङै जिरिङ्ग पार्दछ । त्यहाँका रैथानेहरूले चमारहरूलाई सामाजिक बहिष्कार मात्र गरेनन् । रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाउने रोजगारमा रहेकाहरूलाई गलहत्याउने, औषधिमूलो त परै जाओस् दैनिक उपभोग्य सामान सम्ममा रोक लगाए । पसल भएका चमारहरूलाई सामान बेच्नसम्म दिइएन । कुवामा पानी भर्नमा बन्देज गरियो । सार्वजनिक बाटेामा समेत काँडा लगाएर अपराधको पराकाष्ठा चुमे । शारीरिक र मानसिक मात्रले नपुगेर उक्त निर्णय पालना नगर्नेलाई रु. एक हजार जरिवाना गर्ने भनी आर्थिक यातना दिन पनि बाँकी राखेनन् । अनि यस्तै प्रकृतिको जघन्य घटना सप्तरीकै कोचवकारमा घटाइयो । त्यहाँ त चमारले प्रयोग गर्ने इनारमै सिनु फालेर बहादुरी देखाए । यति मात्रले नपुगेर यस्तो समाचार बाहिर पुर्‍याउन नपाऊन् भनी सिंगो बस्तीलाई नै घेरा हाली पहार दिने प्रपञ्चसमेत रचियो । यसप्रकारको मध्ययुगीन आतंकमा पनि राज्यको चासो पुगेन । दसंैमा ढोल नबजाएकै कारण बस्तीमाथि नै धावा घटनामा खाटो नबस्दै यस्तै घटना यस वर्षको दसैंमा घटाइएको समाचार आएका छन् । आˆना चुनावी घोषणाहरूमा प्रजातन्त्र, समाजवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शदीको जनवाद भन्दै समानताको डिङ हाँक्नेहरूले यस्ता समस्यामा कानमा तेल हालेर बसेका थिए, बसिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलमध्ये मधेसमा एमालेको जनाधार सिर्जना गर्ने दलित सहभागिता ठूलो भए पनि सत्तामा पुर्‍याउने मामलामा भने सधंै कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । उसले रामप्रीत पासवानलाई राष्ट्रपतिको नजिकै पुर्‍याएर पाखा लगायो । यो खेलवाडले मधेसी दलितको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ । समाजवादी चिन्तनका ठूला कुरा गर्ने काङ्ग्रेसले पनि दलित सहभागिताको आवश्यकतालाई बेवास्ता नै गरिरहेको छ । यद्यपि माओवादीले भने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र संविधानसभामा सबैलाई अटाउने प्रयास गर्‍यो जुन सराहनीय छ तर मन्त्रिपरिषद्मा दलितमाथिको रुखो व्यवहारले भने उसैले उठाएको विशेषाधिकारको बर्खिलाप गरको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि मधेसी दलितले क्याबिनेट टेक्न नपाएको अवस्थामा यसलाई पूरा गर्नसकेको भए माओवादीको निरन्तरतामा क्रमभङ्गता शब्द सार्थक हुनेथियो ।
संविधानसभामा कति मधेसी दलित पुगे भन्दा पनि नयाँ बन्ने संविधानमा मधेसी दलितको मुख्य समस्याहरू नागरिकता, भूमिहीनता, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, चरम जातिय भेदभावका विषयमा के के लेखिन्छ भन्ने प्रश्न अहम् हो । त्यस्तै रंगभेद, राजनीतिक एवं सामाजिक उपेक्षा, राज्यका तमाम अवसरबाट वञ्चितिकरण, लैंगिक विभेद, दाइजो प्रथाजस्ता समस्याको सम्बोधन हुने गरी आवाज उठ्छ उठ्दैन त्यो प्रमुख हो । अहिले जति पनि सभासद् छन् तिनले आˆना दलमा समुदायको समस्याको सवालमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार सामाजिक लैंगिक, भौगोलिक, र सांस्कृतिक समानता भएकाले पनि मधेसी दलित राज्यको स्रोत साधन र अवसरबाट पाखा पर्ने स्थिति अब हट्नुपर्दछ । भूमिमाथि दलित वर्गको उचित हक कायम नभएसम्म यिनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने छैन । राजनीतिकर्मीकै अगुवाइमा विभेदजन्य घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै गएमा मात्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सार्थकता पाउन सक्दछ । फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति पुनरावृत्त भयो भने मधेसी दलित सधै हातमा दही जमाएर बसिरहने छैनन् ।
INTERVIEW WITH BABAN SINGH	Tarai fragments